အိုးဝေ: April 2008
Posted by မေအောင် at 8:41 AM Links to this post0comments
ကဗျာငတ်နေတဲ့ကျွန်တော့ကို ကဗျာတောထဲမှ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က စွန့်ကျဲတာလေးတွေ ဝေမျှလိုက်တယ်။
ငါတို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် သွေးပျက်ခဲ့ကြပုံ
ငါတို့ ရယ်ကျဲကျဲ သွားဖြဲခဲ့ကြပုံ။
နွေတွေ မိုးတွေ ဆောင်းတွေ
ငါ့ရဲ့ ပက်လက်ကုလားထိုင်လဲ အိုမင်းခဲ့။
‘သောမတ်မိုး’ လဲ ‘သောမတ်မိုး’ အလျောက်
‘ဂျူယုံဂျီး’ လဲ ‘ဂျူယုံဂျီး’ အလျောက်
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လက်ဖက်ရည်တိုက်ကြ။
ဒီစာရွက်ပေါ်က ငါ့ ‘ခြစ်ရာ’ များ
ခင်ဗျားအသံကိုလဲ ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါစေသား။ ။
English for All,1998,July, No.134
၃ နှစ်လောက် အကြောပေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့
ဘယ်လိုမှ မေ့ပျောက်လို့ မရတဲ့နေ့တွေ
တစ်ဟုန်ထိုး မောင်းထွက်သွားတဲ့ ဘ၀တွေ။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တာကို ကြည့်ပြီး အထင်မသေးနဲ့
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တာကို ကြည့်ပြီး ၀မ်းမနည်းနဲ့
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တာကိုလဲ ဂုဏ်မယူနဲ့။
တစ်ဘ၀ လုံးပုံအောခဲ့တဲ့ ကစားဝိုင်းက မသိမ်းသေးပါဘူး။
English for All, 1999,May, No.144
Posted by ကိုလူအေး at 12:19 AM Links to this post0comments
ရှေ့ပိုင်းမှာ ချက်ဟော့(ဗ်)ရဲ့ paradox အတိုလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “ခွင့်ပန်ခြင်း” ဆိုတာကို ဘာသာပြန်ခဲ့တုန်းက နောက်ထပ်ဒါမျိုးလေးတစ်ခု ဘာသာပြန်ဦးမယ်လို့ ကြော်ငြာဝင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အခု အဲဒီကြော်ငြာထားတဲ့ အတိုလေးတစ်ခုပါ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။ ချက်ဟော့(ဗ်)က အတိုရေးတဲ့နေရာမှာ ဆရာကြီးပါ။ သူပြောတဲ့ စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ “တိုတိုတုတ်တုတ်ရေးတတ်ခြင်းဟာ ပါရမီရဲ့အမပါ။”
ချက်ဟော့(ဗ်)က သူ့ညီဆီရေးတဲ့စာထဲမှာ အဲဒီစာကြောင်းကိုထည့်ရေးပါတယ်။
“Краткость — сестра таланта. Если бы мне прожить еще сорок лет и все эти сорок лет читать, читать и читать, и учиться писать талантливо, то есть коротко, я выпалил бы во всех вас из такой большой пушки, что задрожали бы небеса.”
“တိုတိုတုတ်တုတ်ရေးတတ်ခြင်းဟာ ပါရမီရဲ့ အမပါ။ တကယ်လို့ ငါသာနောက်နှစ်လေးဆယ် ထက်ပြီး အသက်ရှင်နေရဦးမယ်ဆိုရင် အဲဒီနှစ်လေးဆယ်မှာ စာတွေကိုဖတ်မယ်၊ အများကြီးကိုဖတ်မယ်၊ ပြီး ပါရမီရှင်ဆန်ဆန် ရေးတတ်အောင် သင်ယူမယ်၊ ဆိုလိုတာက တိုတိုတုတ်တုတ်ရေးတတ်အောင် သင်ယူပြီး ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး တုန်ဟီးသွားလောက်အောင် အမြောက်ကြီးကနေပစ်လိုက်သလိုမျိုး မင်းတို့အားလုံးကို ငါပစ်လိုက်မယ်။”
နောက် ချက်ဟော(ဗ်)ပြောတဲ့ စကားရှိပါသေးတယ်။ “ဘူနင်”ကိုပြောခဲ့တာပါ။
“По-моему, написав рассказ, следует вычеркнуть его начала и конец. Тут мы, писатели, больше всего врём. И короче, как можно короче надо писать.”
“ငါ့အမြင်တော့ ၀တ္ထုတိုတွေရေးတဲ့နေရာမှာ အစနဲ့ အဆုံးကို ဖျက်ပြစ်ရမယ်။ တို့စာရေးဆရာတွေက အဲဒီနေရာတွေမှာ မုသားတွေအများကြီးပြောတာ။ တိုတိုပဲ ဖြစ်နိုင်သမျှတိုအောင်ရေးရမယ်။”
အတိုရေးရာမှာ ဆရာကျတဲ့ ချက်ဟော(ဗ်)ရဲ့ အတိုရေးရခြင်းအကြောင်းရင်းခံ စကားအချို့ပါ။ အခုတော့ ဖောင်းကားစကားလုံးများ(မြန်မာလိုရော ရုရှားလိုပါ မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်) သုံးထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘာသာပြန်ကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ အရင် “ခွင့်ပန်ခြင်း” မှာတုန်းက ဇာတ်ကောင် အမျိုးသမီးကို သဘောကျလို့ ဇာတ်လိုက်ဖြစ်ချင်ဇောနဲ့ “ဖြူရယ်ကြက်ကင်” ရယ်လို့တောင် နာမည် ပြောင်းဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့ ကိုဖြူရေ အခု ဒီအတိုထဲက ဒီလို“သူမ”ကိုရော စွဲလမ်းလို့ မခွဲနိုင်ဖြစ်နေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါဦးဗျာ။
အင်း မိဘတွေ၊ လူကြီးသူမတွေက အသေအချာ ပြောပြတာတော့ သူမက ကျွန်တော့်ထက်စောပြီး မွေးတာတဲ့။ သူတို့ပြောတာ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး၊ ကျွန်တော်သိတာကတော့ သူမရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကို မခံရတဲ့နေ့၊ သူမကို သတိမရမိတဲ့နေ့ဆိုတာ တစ်နေ့တစ်ရက်မှ မရှိပါဘူး။ သူမက ကျွန်တော့်ဆီကနေ နေ့ရောညပါ ထွက်ခွာမသွားသလို ကျွန်တော်ကလည်း သူမကို ထွက်ပြေးစေလိုတဲ့ အရိပ်အရောင်တောင် မပြပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးကတော့ ခိုင်မာသထက် ခိုင်မာဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာ။ မနာလိုမဖြစ်ပါနဲ့ စာဖတ်သူမိန်းကလေးရေ။ အဲဒီနူးညံ့သိမ့်မွေ့လှတဲ့ ဆက်ဆံရေးက စိတ်ညစ်စရာကလွှဲပြီး တစ်ခြားအရာတွေကို သယ်ဆောင်မလာပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့သူမက နေ့ရော၊ညပါ ကျွန်တော့်အနားက မခွာတော့ကာ ကျွန်တော် အလုပ်တွေလည်းမလုပ်ရပါဘူး။ စာဖတ်တော့လည်း နှောင့်ယှက်တာပဲ၊ စာရေးတဲ့အချိန်ဆိုလည်း နှောက်ယှက်တာပါ။ သူမနှောင့်ယှက်လို့ လမ်းလျှောက်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်က စိမ်းစိုလန်းဆန်းတဲ့ ရှုခင်းတွေလည်း ကောင်းကောင်းမခံစားရပါဘူး။ ကျွန်တော် အခု စာကြောင်းတွေ ရေးနေတော့လည်း တံတောင်ဆစ်ကို လာလာတိုးပြီး နှောက်ယှက်နေပါတယ်။ ဟိုဂန္ထ၀င်ဘုရင်မ “ကလိရိုပတ်တရာ” က “အန်တိုနီ”ကို သိမ်းသွင်းတာထက်မနည်းဘဲ ကျွန်တော့်ကိုလည်း အလိမ်အညာတွေ ပြောဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သူမက ကျွန်တော့်ကို ပြင်သစ်အပျက်မတစ်ယောက်လို ဖျက်ဆီးတတ်ပါသေးတယ်။ သူမကို ဒီလောက်တောင်ဆွဲမက်နေမှတော့ အလုပ်အကိုင်တွေ၊ ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောမှုတွေ၊ အားလုံးသော ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကိုလည်း စွန့်လွှတ်ရပါတယ်။ သူမရဲ့ ကြင်နာသနားတတ်မှုကြောင့်လားဗျာ ကျွန်တော်မှာ အ၀တ်လည်းကောင်းကောင်းမ၀တ်ရ၊ ဈေးပေါပေါအခန်းမှာနေရ၊ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်တွေစားရ၊ ရေးတော့လည်း ကလောင်တံအစုတ်နဲ့ပါ။ လောဘကြီးတဲ့သူမ အကုန်လုံးကို ငမ်းငမ်းတတ်စားသုံးဖျက်ဆီးတော့တာပါပဲ။ ကျွန်တော် သူမကို ရွံရှာမုန်းတီးနေပါပြီ။ သူမနဲ့လမ်းခွဲသင့်တာကြာလှပြီဆိုပေမယ့် အခုအချိန်အထိလည်း လမ်းမခွဲရသေးပါဘူး။ မော်စကိုက ရှေ့နေတွေက ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုအတွက် ငွေ ၄၀၀၀ ယူကြလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့မှာ သားမမီးလည်း မထွန်းကားသေးပါဘူး။ ကဲ သူမရဲ့နာမည်ကို သိချင်ကြလားဗျာ။ သူမနာမည်က ကဗျာဆန်ဆန် ဘာတွေနဲ့ဆင်သလဲဆိုတော့ လီလျာ၊ လျှိုလျာ၊ နယ်(လ်)လီ …….
သူမနာမည်က “လင်း(န်)” တဲ့ဗျ။
“လင်း(န်)”-ဆိုတာက ရုရှားဝေါဟာရ “feminine gender”ဖြစ်တဲ့ [Лень] ဆိုတဲ့ “ပျင်းရိမှု”ကိုပြောတာပါ။
Posted by ဇနိ at 2:48 AM Links to this post3comments
Posted by မောင်ဖြူ at 11:47 PM Links to this post3comments
Posted by မောင်ဖြူ at 9:07 PM Links to this post2comments
Posted by ဇနိ at 2:12 PM Links to this post9comments
Posted by ဇနိ at 1:01 AM Links to this post6comments
Posted by မေအောင် at 5:46 PM Links to this post2comments
Posted by မောင်ဖြူ at 12:12 AM Links to this post2comments
Posted by မေအောင် at 8:21 PM Links to this post0comments
Posted by ဇနိ at 12:48 AM Links to this post3comments
မိဘအုပ်ထိန်းမှုအောက်ကနေ ကင်းလွတ်ချင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဘာသာပြန်လိုက်တာပါ။ ရုရှားလိုဖတ်လိုသူများ ဒီမှာဖတ်ကြပါ။
နှစ်သစ်မှာ စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
( အလွန်ထက်မြတ်သောလူနှစ်ယောက်၏ စကားဝိုင်းမှ)
တစ်နေ့တွင် ဖခင်၏အခန်းအတွင်းသို့ သားအကြီးသည် ရောက်လာပြီး ဖခင်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မနေလိုတော့ဘဲ လူ့လောကထဲတွင် မိမိသဘောအတိုင်းသာ နေလိုကြောင်း ပြောလေသည်။ ယင်းသို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းမှာ သိပ်မကြာသေးခင်က သူသည် အသက် နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
အားလုံးကိုနားထောင်ပြီးသောအခါ ဖခင်မှ - ကောင်းပြီ သား၊ အဖေသဘောတူပါတယ်၊ ကိုယ့်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ စပြီးမနေခင်မှာ အဖေ့ဆီမှာ ဘ၀ဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသေးသေးလေးတစ်ခုတော့ မင်းဖြေရမယ်။ ကဲ ထိုင် အခုပဲ စာမေးပွဲ စစ်လိုက်မယ်။
သားကထိုင်လိုက်သောအခါ အဖေက မျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်လိုက်ပြီး စမေးလေသည်။
- ၀က်သားစားတဲ့အခါ ပါးစပ်က ဘာအနံ့ထွက်သလဲ။
- ၀က်သားဆိုင်တန်းနံ့ ထွက်ပါတယ်။
- အင်း မိန်းမတွေ ဆပ်ပြာမသုံးဘဲ ဘာတွေကို လျှော်ဖွတ်သလဲ။
- ယောက်ျားတွေရဲ့ ခေါင်းတွေကိုပါ။
- အကယ်၍ လူတွေက အထက်ကို ခြေထောက်တွေနဲ့တက်သွားရင် ဘာတွေများ ရှိနေလို့လဲ။
- အဲသလိုဆို ဦးထုပ်မှာ ငှက်မွှေးရှိနေလို့ရင် ဖြစ်ရမယ်၊ ဖိနပ်ကောင်းကောင်းစီးထားလို့ရင်လည်း ဖြစ်ရမယ်။
- သိပ်မှန်တယ်၊ ပင်လယ်ရေ ဘာကြောင့် ငန်သလဲ။
- ပင်လယ်ထဲမှာ ပင်လယ်ငါးတွေ ရေကူးကြလို့ပါ။
- ရှေးရှေးက ဟာကြီးပဲ။ ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားပြီး ဖြေပါဦး။
- ပင်လယ်ရေငံတာက အင်း ပင်လယ်ထဲမှာ တခါတလေ ဟာသသမားတွေ ရေဆင်းကူးလို့ပါ။
- ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်၊ နောက်တစ်ခုမမေးခင်မှာကြိုပြောမယ်၊ ငန်းတွေ ဘယ်ကစပြီးရေးကူးသလဲ ဆိုရင် တို့တွေ ကမ်းစပ်ကနေကူးတယ်လို့ ဖြေကြတယ်။ အဲ အခုမင်းဖြေတော့ ငန်းလည်တွေ ဘယ်ကနေ ရေကူးပြေးကြသလဲ။
- အကြွေးတွေ၊ စစ်မှုထမ်းတာဝန်တွေကနေပါ။
- နောက်စေ့မှာ ဘာ့ကြောင့်မျက်မှန် မတပ်သလဲ။
- ဇာတ်ပိုးအုပ်လိုက်ရင် မျက်မှန်ကွဲသွားမှာစိုးလို့ပါ။
- လူကို ဘာလို့ ၀က်လို့ မခေါ်ရတာလဲ။
- သူက ငြိမ်းချမ်းရေးဆီကို ဒရွတ်ဆွဲသွားနေလို့ပါ။
- ဘယ်လို ချီက တက္ကသိုလ်ပြီးသလဲ။ (ချီဆိုတာက ရုရှားလိုဆိုရင် (Siskin)ငှက် လို့လည်းအဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။)
- ဒေါက်တာ ချီ။
- ပြုတ်ကျတဲ့(မအောင်မြင်တဲ့) သတ္တ၀ါလို့ ဘယ်သူတွေကို သတ်မှတ်နိုင်သလဲ။
- မျှော်စင်ပေါ်က ပြုတ်ကျတဲ့သူကိုပါ။
- ပိုက်ဆံကို ဘယ်မှာ သွားချေးနိုင်သလဲ။
သားသည် ခေါင်းကြီးမော့ကာ စဉ်းစားလေသည်။
- မသိဘူးလားကွ သားရ။ အင်း မင်းလူ့လောကထဲ တိုးဝင်ဖို့ထိုက်တန်ပြီလား။ ငါ့အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာပဲ နောက်တစ်လနေပါဦးကွ။
Posted by ဇနိ at 12:51 PM Links to this post3comments
Posted by ကိုလူအေး at 4:47 PM Links to this post2comments
၁၃-၄-၂၀၀၈(တနင်္ဂနွေနေ့) မှာ ကမကုရ-ဘုရားကိုသွားတာ လမ်းမှာ မြန်မာလိုဆိုရင် ဘုရားလှည့်လိုမျိုး၊ ၀န်းခင်းတာမျိုးလိုလိုတွေ့ခဲ့လို့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက်မှာနောက်မှ ရှာဖတ်မယ်ဆိုတော့လည်း အဲဒီအကြောင်းကို သေသေချာချာရှာမတွေ့ပါဘူး။ ဆာမူရိုင်းလိုဝတ်ထားတာတွေ၊ လမ်းပေါ်မှာ သွားရင်းလာရင်း အမျိုးသမီးတွေ ယိမ်းကသလိုကတာတွေ၊ ကလေးလေးတွေလည်း ညီညီညာညာကတာတွေတွေ့တော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Posted by ဇနိ at 3:14 PM Links to this post0comments
Posted by ဇနိ at 2:07 AM Links to this post 1 comments
မ၀ံ့မရဲပြောလာသော သူ့အသံသြရှရှကို ခေါင်းငုံ့နားထောင်ရင်း
“အင်း”ဟု မော့မကြည့်ဘဲ ဆိုလိုက်၏။
ဆံနွယ်တွေဆီမှ ကျလာသော အေးစိမ့်သည့် ရေစက်အချို့မှာ ရှက်စိတ်နှင့် ပူနွေးနေသော မျက်နှာပေါ်သို့…။
နှာခေါင်းကို လက်နှင့် ဖွဖွပိတ်ခါ အသက်ရှုရင်း သူရေလောင်းပြီးရင် ဘာပြောလာမလဲ…..ဘာပြန်ပြောရမလဲ။
ရင်ခုံသံ တဒိတ်ဒိတ်က နားဆီထိရိုက်ခတ်နေသည်။
ဆံပင်အချို့ကို သပ်တင်ရင်းကြည့်လိုက်တော့ ရေခွက်ကိုပိုက်ရင်း သူကပြုံးတုံ့တုံ့နှင့် ငုံ့ကြည့်ကာ တိုးဖွဖွဆို၏။
သူ့အကြည့်ကို ကြာကြာရင်မဆိုင်ရဲစွာ လွှဲဖယ်ရင်း…ဟုတ်…လို့ပဲဆိုမ်ိပြန်သည်။
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ မရောက်သေးပဲနဲ့ မမတိုးတို့ရေတွင်း ဘယ်သူလာဆည်သွားလည်း
နှင်းနှင်းအော်သံကို ကြားသည်နှင့် “သွားတော့မယ်..”ဟု နှုတ်ဆက်တော့ သူက
“ညကြ ဒွေးလေးတို့အိမ်ဘက် ခဏလာခဲ့ဦးနော်”ဟု တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြောရင်း နှင်းနှင်းတို့ရှိသော မာလကာပင်တန်းဆီသို့ အရင်သွားနှင့်သည်။
တစ်ကိုယ်လုံးစိုကပ်သွားသည့် အ၀တ်အစားတွေကို ဆွဲဆန့်ရင်း နှင်းနှင်းတို့ဆီ မသွားတော့ပဲ အိမ်ဘက်ဆီ ကို ပြန်လာခဲ့သည်။ နှင်းနှင်းတို့ စမှာကြောက်တာရော သူ့ကိုရှက်နေတာရော။
အဘသည် ရေနွေးကြမ်းအိုးတစ်လုံးနှင့်…။.ခါတိုင်းလိုပဲ အ၀တ်စုတ်တစ်ခုနှင့် စားပွဲကိုပြောင်လက်အောင် ပွတ်တိုက်နေသည်။
တန်းလျားဘောင်နားကပ်၍ “ဘ……” လို့ခေါ်လိုက်တော့အဘက “ဗျို”လို့ထူးရင်း
”ဘာလိုလိုနဲ့ ငါ့မြေးတောင်အရွယ်ရောက်လာပြီပေါ့ ဟုတ်လား”ဟု ပြုံးပြုံးကြီး ဆိုလေသည်။
“ဘ….အမေကြီးကို မပြောသေးနဲ့ဦးနော် သမီးကြောက်တယ်”
“ဟားဟား ငါ့မြေးကိုဆူရင် ဘက ဟေ့ မမြရွှေ ညည်းကို ကျုပ်ခေါင်းကနေ ရေဖြိုလောင်းတုန်းက ညည်းအသက် ငါ့ မြေးလောက်မရှိသေးဘူးလို့ တစ်ခွန်းပဲပြောလိုက်မယ်”
“သွား အ၀တ်အစားလဲချေ မကြောက်နဲ့ဘရှိတယ်”
ပြောရင်း ဘက တဟားဟားရယ်နေတာကိုတွေ့မှ ဘနှင့်အတူလိုက်ရယ်ရင်း အခန်းထဲကို ပြေးဝင်လာခဲ့သည်။
အရင်ဆုံး ရေစိုနေသည့်ခေါင်းကို တဘက်နှင့် ဖွဖွသုတ်ရင်း ဒီနေ့သင်္ကြန်အကြတ်နေ့မှာ ချစ်သူအဖြစ်စတင် တော်လိုက်တဲ့ သူ့မျက်နှာချိုချိုပြုံးကို မြင်ယောင်နေမိသည်။
(သင်္ကြန်အကြတ်နေ့တွင် ကိုယ်ပြန်လည်မေတ္တာမျှနိုင်သူကို ခေါင်းမှရေဖြိုလောင်းခွင့်ပြုချင်းဖြင့် အဖြေပေး တတ်သော အလေ့ရှိသည့် မေတို့ရွာက အပျိုမတွေကို အောက်မေ့ရင်း…..ကိုဇနိနှင့်မဇနိက သင်္ကြန်မှာချစ်သက်တမ်းခြောက်နှစ်ပြည့်တာဆိုတော့ အဲလိုများ အဖြေပေးရင်း ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြတာလားလို့တွေးကြည့်ရင်း……ဆောင်းကမကုန်သေးပဲ မိုးကသဲသဲမဲမဲရွာနေတော့ တုန်ချမ်းချမ်းတုန်ချမ်းနဲ့ သင်္ကြန်ကိုအလွမ်းသည် လိုက်ရပါသည်။)
Posted by မေအောင် at 1:28 AM Links to this post4comments
Posted by မေအောင် at 9:15 PM Links to this post 1 comments
Posted by ဇနိ at 1:10 AM Links to this post0comments
Posted by ဇနိ at 10:59 PM Links to this post 1 comments
Posted by ဖိုးသောကြာ at 3:19 PM Links to this post0comments
ဟင်းလင်းပြင်ထဲတွင် ညပ်နေသည့် သစ်သီးတစ်လုံးကို
သို့တည်းမဟုတ် ... အပြစ်ယူတော်မူပါ
ကျွန်တော်ကတော့ မျှော်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ဇနိ at 5:45 AM Links to this post0comments